2010-06-20 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​မေးးmoe-z - ​အစ်​ကို့​ဆိုဒ်​ကို​တော့ ​အ​မြဲ​တမ်း ​ဝင်​ဖတ်​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ​ခု​လည်း ​အစ်​ကို​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​ဆို​ရင် ​ကူ​ညီ​ပါ​အုံး။ ​ကျွန်​တော် youtube ​က​နေ video ​ဖိုင်​ကို download ​လုပ်​ချင်​လို့ . . . ​အဲ့​ဒါ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ . . . ​ဘယ်​လို download ​မျိုး​သုံး​ရ​မ​လဲ . . . ​လမ်း​ညွှန်​ပေး​ပါ​အုံး . . . ​တ​ကယ်​လို့​များ ​အစ်​ကို connection ​ကောင်း​လို့ ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​ဆို​ရင် ​ပို့​ပေး​လို့​ရ​မယ်​ဆို​ရင်​လည်း ​ပို့​ပေး​စေ​ချင်​ပါ​တယ်...
​ဖြေး​ဒီ​မှာ (or) ​ဒီ​မှာ (or) ​ဒီ​မှာ ​တင်​ထား​ပေး​ပါ​တယ် . ​တစ်​ခု​နဲ့ ​မ​ရ​ရင် ​တစ်​ခု​ကို Download ​လုပ်​ပြီး​တော့ ​လုပ်​လိုက်​ပါ . ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် . ​တော်​တော်​များ​များ ​မေး​ခွန်း​တွေ​က ​ကျွန်​တော် ​တင်​ပေး​ထား ​ပြီး​သား ​ချည်း​ပါ​ပဲ . ​မ​မေး​ခင် ​အ​ရင် search box ​မှာ ​ရှာ​စေ​ချင်​ပါ​တယ် .
​မေးးthar tharး​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ခင်​ဗျား..​တ​ကယ်​လို့​များ ​အ​ဆင်​ပြေ​ခဲ့​ရင် Autocad 2008 Tutorial PDF ​နဲ့ Adobe Illustrator 10 (or)11 Tutorial PDF ​ဖိုင်​လေး​များ ​တင်​ပေး​စေ ​လို​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျား ​အ​မြဲ​တန်း ​ကျေး​ဇူး​တင်​လျှက်
​ဖြေး​ကျွန်​တော့်​ဆီ​မှာ ​မြန်​မာ​လို​တော့ ​မ​ရှိ​သေး​လို့ ​အ​င်္ဂ​လိပ်​လို ​ရေး​ထား​တာ​လေး ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် . ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် . ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​ယူ​လိုက်​ပါ ​စာ​အုပ် (2) ​အုပ် ​တင်​ပေး​လိုက် ​ပါ​တယ် .
​မေးး​ကို​ညီ ​ဆီ​မှာ ​အ​ကူ​အ​ညီ ​တောင်း​လို့​ရ​မ​လား XP ​အ​တွက် bluetooth driver ​လို​ချင်​လို့​ပါ ​ကျွန်​တော့် ​ကွှန်​ပျူ​အ​မျိုး​အ​စား ​က compaq v3772tu ​ပါ ..
​ဖြေး​ဒီ​မှာ Download ​လုပ်​ယူ​လိုက်​ပါ . External Mirror 1 ​ဆို​တဲ့ ​စာ​ကြောင်း​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ .
အခုခေတ်မှာ Adobe After Effect ဆိုတာကတော့ Video Editor သမားတွေအတွက်တော့ သိပ်ပြီး မစိမ်းတော့တဲ့ စကားလုံးလို့လဲ ဆိုနိုင်ပါတယ် ... Adobe Pre...